Ihe ị ga - eme na Mallorca n'oge oyi | Akụkọ Njem
Susana Garcia | | General, Palma de Mallorca
La Agwaetiti Majorca Ọ nwere oge dị elu n'oge ọkọchị, mgbe onye ọ bụla bịara ịnụ ụtọ ihu igwe dị mma nke Mediterranean, mmiri ya na nnọkọ ahụ n'akụkụ ụfọdụ nke agwaetiti ahụ. Agbanyeghị, ọ bụkwa ebe anyị nwere ike ịga na obere oge ma nwee ọ enjoyụ. Ọ bụ ezie na njem abụghị otu na ọtụtụ ụlọ ọrụ dị nso, ị nwere ike ịhụ ọtụtụ ihe na-atọ ụtọ.
Ọ bụrụ na anyị na-eme atụmatụ a njem na obere ogeAnyị ga-enwetakwa uru na ọ ga-adị ọnụ ala karịa ma anyị ga-enwe ike ịnụ ụtọ ọtụtụ ihe ncheta na ebe ndị njem na-agaghị ata ahụhụ ogologo oge ma chere. Ọ bụ oge kachasị mma iji chọpụta akụkụ ụfọdụ nke Mallorca na udo zuru oke.
1 Gaa na Katidral nke Mallorca
2 Gagharịa n’obodo ochie
3 Gaa Leta Bellver Castle
4 Hụ Caves nke Drach
5 Gbalịa ensaimada
Gaa na Katidral nke Mallorca
Katidral nke Mallorca bụ otu n'ime nleta kachasị mkpa na agwaetiti ahụ, Katidral nke Santa María de Mallorca ma ọ bụ La Seu bụ isi ụlọ okpukpe ya. Ewu malitere na narị afọ nke XNUMX na Vantdị gothic Levantine. A na-akwụ ụgwọ ọnụ ụzọ ahụ ma jiri ya nwee ike ịnweta ime nke katidral, ebe a na-edebe ihe mgbe ochie na ebe mkpuchi ahụ, ebe enwere ụlọ ahịa ihe ncheta, nke bụ ebe ọpụpụ dị.
N'ime katidral enwere ike ịnụ ụtọ ihe dị iche iche. Site na ndi ogugu nke ndi okpukpe rue na ebe ịchụàjà. Ma n'ezie ma ọ bụrụ na e nwere ihe na-adọta uche nke ndị niile na-abanye na ya na nnukwu agba nke iko ya nwere, karịsịa nke etiti rosettes. Ọ bụ nnukwu ihe ngosi na-ahapụ onye ọ bụla enweghị mmasị. Anyị na-akpọ gị oku ka ịnọdụ ala na etiti etiti naanị nwee obi iru ala nke ime ya na windo windo ndị mara mma. Otu n'ime ụgbọ mmiri ị nwekwara ike ịhụ ọrụ nke onye na-ese ihe Miquel Barceló, ya na polychrome wax mural nke na-adọta uche n'ime katidral ahụ. N'ikpeazụ, anyị ga-enwe ike ịzụta ihe ncheta n'ụlọ ahịa ahụ ma anyị ga-aga n'okporo ámá nke akụkụ ochie nke obodo ahụ.
Gagharịa n’obodo ochie
Thehapụ katidral anyị nwere ike ịga n'ihu njem anyị site na okporo ámá ochie nke Palma. N’okporo ámá ndị a, ọ bụrụ na anyị nwere oge, ọ ga-adị mma ịga ije n’enweghị isi, ịhụ ebe ha na-akpọga anyị, ebe ọ bụ na ha na-eju anyị anya mgbe nile. Anyị nwere ike ịbanye na ọdụ ụgbọ mmiri ma ọ bụ mpaghara ọhụrụ, mana anyị nwere ike ịbịnye ha ọzọ. Ọ bụ akụkụ mara mma nke obodo ahụ, ebe anyị nwere ike ịchọta ụfọdụ n'ámá, ahịa ochie na karịsịa ụlọ ahịa, ụfọdụ na-adọrọ mmasị na ndị ọzọ nwere ihe ncheta dị iche iche.
Gaa Leta Bellver Castle
Bellver Castle bụ otu n'ime nleta dị mkpa na Palma. Lọ a na-adọta uche n'ihi na ọ nwere atụmatụ okirikiri. O kwere omume ibute na ụgbọ ala na-esote nnukwu ụlọ ahụ, mana ọ bụkwa nnukwu echiche, ọ bụrụ na ihu igwe dị mma, gbagoro na mgbidi a na-anụ ụtọ mpaghara ọhịa gbara gburugburu, ebe anyị nwere ike ịchọta obere ụka na ogige. Na mbanye n’obí bụ n'efu na Sọnde, na n’oge dị ala ị nwekwara ike ịhụ ụbọchị a nwayọ. N’ime ụlọ ahụ, e nwere ihe ngosi na-agwa anyị banyere akụkọ ntolite ya na nke obodo Palma. Ọ ga-ekwe omume ịgbago n'etiti etiti ahụ yana teres elu, site na ebe ị nwere ike ịnụ ụtọ ọhụụ obodo, ugwu na oké osimiri.
Hụ Caves nke Drach
Nleta ọzọ na-adọrọ mmasị n'àgwàetiti ahụ n'oge dị ala bụ Caves of Drach. Ọgba ndị a dị n’ime ala nwere ọmarịcha mma, anyị pụkwara ịhụ otú e si kee ha kemgbe ọtụtụ narị afọ. Iji ruo ebe ahụ site na Palma ọ ga-ekwe omume iji bọs ma ọ bụ ọzọ na ụgbọ oloko na Manacor wee buru ụgbọ ala ọzọ gaa n'ọgba ma ọ bụ Porto Cristo. N'ime ọgba anyị ga-akwụ ụgwọ ego mbata nke na-eme ka anyị nwee ike ịgagharị na ha, na-achọpụta akụkọ ihe mere eme ha na nkọwa ha yana mma egwu. N'akụkụ ọdọ mmiri ahụ nwere usoro ụfọdụ ị ga-esi na-anụ ụtọ egwu ahụ, nke sitere na ụfọdụ ndị egwu na-abanye n'ụgbọ mmiri na ọdọ. Mgbe ahụ, anyị nwere ike iji ụgbọ mmiri si n'otu akụkụ ọdọ ahụ gaa n'akụkụ nke ọzọ ma ọ bụ gafere akwa ahụ.
Otu n'ime ihe agaghị echefu na nleta Mallorca bụ ịnụ ụtọ ensaimadas. Ngwaahịa ya kachasị dị na pel, na n'ezie a tọrọ ụtọ eji megharịa ọnụ ịmalite ma ọ bụ mechie ụbọchị. Ensaimadas nwere nha dịgasị iche iche, site na obere obere na ensaimadas ndị na-ejere ọtụtụ mmadụ ozi. Enwere ike ịchọta ha n'ụlọ ahịa pastry Majorcan yana ebe ndị njem nleta na n'ọdụ ụgbọ elu, ha na-ejikwa igbe ndị a na-ahụkarị ebe ha kechiri. You nwere ike ịhọrọ ndị dị larịị, nke naanị nwere shuga shuga n'elu, ma ha nwekwara chocolate, ude ma ọ bụ ntutu mmụọ ozi, maka ndị chọrọ ịnwale usoro niile. Ọ naghị ada azụ iji igbe ma ọ bụ abụọ ensaimadas na ụgbọ elu laghachi n'ụlọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Ihe ị ga-eme na Mallorca n'oge oyi
Sklọ elu kacha mma na Tokyo